Waa maxay muhiimada daahirinta Kirishtaanka?
Daahirinta Kirishtaanka waa mid ka mid ah labo sharciyo ee Ciise u sharciyeeyay kaniisada. Hadda ka hor qaadistiisa, Ciise wuxuu yiri, “Aad oo samey xirta dhammaan wadamada oo dhan, iyaga oo isku daahirinayo magaca Aabaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska, iyo baridooda oo lagu cadeecayo wax walba aan ku amray. Iyo xaqiiqdii marwalba waan kula jiraa, illaa dhammaadka ugu dambeeyo baaxada” (Matayos 28:19-20). Tilmaamahaan waxay qeexayaan in kaniisada ay masuul ka tahay barida erayga Ciise, sameeyo xirar, oo daahirinayo xirtaas. Waxyaabahaan waxaa lagu sameynayaa meel walba (“dhammaan qowmiyadaha”) illaa “dhammaad ugu dambeeyo baaxada.” Marka, haddii aysan jirin sababo kale, daahirinta waxay leedahay muhiimad maxaa yeelay Ciise ayaa amray.
Daahirinta waxaa lagu dhaqmayay ka hor aasaaska kaniisada. Yahuuda waqtiyada qadiimiga waxay isku daahiriyeen ku raacsanaanta lagu tilmaamayo badelka dabiiciga “daahirinta”. Joon Daahiriyaha wuxuu isticmaalay daahirinta lagu diyaarinayo wadada Illaah, oo u baahan wax walba, aanan aheyn kaliya Dadka aan yahuuda aheyn, inay is daahiriyaan sababtoo ah qof walba wuxuu u baahanyahay tooba keenka. Si kastaba, Daahirinta Joon, waxay tilmaameysaa towbakeenka, la mid ma ahan sida daahirinta Kirishtaanka, sida lagu arkay Falimaha Rasuullada 18:24-26 iyo 19:1-7. Daahirinta Kirishtaanka waxay leedahay muhiimada.
Daahirinta waxaa lagu sameynayaa magaca Aabaha, Wiilka, iyo Isbiiradka—tani waa waxa ka dhigo “Kirishtaanka” daahir. Waa dhinaca sharcigaan in qofka la geeyo wahelnimada kaniisada. Marka aan badbaado nahay, waxaan ku “daahirsannahay” Isbiiridka ee Jirka Masiixiga, kaas oo ah kaniisada. Marka koowaad Korintos 12:13 wuxuu yiri, “Waxaan dhammaanteen ku daahirsannahay Isbiiridka si aan u aasaasno hal jirka—haddii Yahuuda ama Dadka aan yahuuda aheyn, adoomada ama dadka xorta ah—oo waxaa dhammaanteen nala siiyay inaan ka cabno halka Isbiirid.” Daahirsanaanta biyaha ah waa “dib u hergelinta” ee daahirsanaanta ee Isbiiridka.
Daahirsanaanta Kirishtaanka waa micnooyinka ee qofka sameeyo shaqada bulshada ee aaminaada iyo xirnimada. Ee biyaha daahirinta, qofka wuxuu dhahaa, aamusnaanta, “Waxaan qirayaa in aaminaada ay ku jirto Masiixi; Ciise wuxuu nadiifiyay ruuxeyga dambiga, oo hadeer waxaan leeyahay nolol cusub ee qaduusnaanta.”
Daahirinta Kirishtaanka muujiyaan, oo qaab riwaayada, dhimashada, duugta, iyo soo noolaanshaha Masiixiga. Isla waqtigaas, waxay sidoo kale ku muujisaa dhimashada dambiga iyo nolosha cusub ee Masiixiga. Sida dambiilaha qirta Illaaha Ciise, wuxuu ku dhintay dambi (Rooma 6:11) oo wuxuu ku soo ka cayaa nolol cusub (Kolosay 2:12). Biyaha hoostooda ee biyaha waxay matashaa dhimashada dambiga, oo ka imaanayo biyaha waxay matashaa nadiifsanaan, nolol quduus ah ee raaco badbaadada. Rooma 6:4 qaabkaan geliyaa: “Waxaan sidaas darteeda la duugnay isaga dhinaca daahirinta ee dhimashada si markaas, sida Ciise looga soo kiciyay dhimishada oo dhinaca ammaanta Aabaha, inaga sidoo kale waxaan ku noolaan karnaa nolol cusub.”
Aad u sahlan, daahirsanaanta waa marqaatiga banaanka ee badelka gudaha ee nolosha aaminayaasha. Daahirsanaanta Kirishtaanka waa ku dhaqanka u hogaansanaanta ee Illaaha badbaadinta kadib; inkastoo daahirsanaanta ay si dhow ula xiriirto badbaadada, ma ahan sharuuda lagu badbaadayo. Baybalka wuxuu muujiyaa meelo badan ee in amarka dhacdooyinka ay tahay 1) qofka aaminaa Illaalaha Ciise iyo 2) waa la daahiray. Isku xiga waxaa lagu arkaa Falimaha Rasuullada 2:41, “Kuwa ogolaaday fariinta [Butros] waa la daahiriyay” (fiiri sidoo kale Falimaha Rasuullada 16:14-15).
Aaminayaal badan ee Ciise Masiixi waa inay go’aansadaan in la daahiriyo sida ugu dhaqsiha badan oo suurtogalka ah. Gudaha Falimaha Rasuullada 8 Filib wuxuu ka hadlayaa “aqbaaraha wanaagsan ee ku saabsan Ciise” ee ninkii Itoobiyaanka, iyo, “sida ay ku safreen wadada, waxay soo gaareen biyo yar iyo ninkii wuxuu yiri, ‘Fiiri, halkaan waa biyo. Maxaa joogsan karo wadada lagu daahiranyo?’” (aayadaha 35-36). Isla markaas, waxay joojiyaan tartankii, iyo Filib ayaa daahiray ninka.
Daahirinta waxay muujisaa aqoonsiga aaminaha ee dhimashada Masiixi, duugta, iyo soo noolaanshaha. Meel walba injiingalka ayaa lagu wacdiyaa iyo dadka waxaa la geliyaa aaminaada Masiixi, waa la daahiranayaa.